Fifandonana mahery vaika – Amboasary Atsimo: mpanara-dia efatra indray maty voatifitry ny dahalo | NewsMada
Mbola tena mafotaka sy henjana ny tsy fandriampahalemana noho ny afitsoky ny dahalo, any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy. Ny alahady alina teo, mpanara-dia efatra indray namoy ny ainy, maty voatifitra nandritra ny fifandonana, tao Ampasimaiky, kaominina Amboasary Atsimo.
Olona efatra maty teo no ho eo vokatry ny tifitra nataon’ny dahalo tao amin’ny fokontany Ampasimaiky, kaominina Amboasary Atsimo, ny alahady alina teo. Araka ny fanazavan’i Hervé, kaomandin’ny borigadin’ny zandarimaria ao Tsivory, nanafika ny fokontany ny andian-dahalo manodidina ny tamin’ny 6 ora sy sasany hariva ka lasan’izy ireo tamin’izany ny omby miisa 51. Nanao “hazolava” anefa ny fokonolona eo amin’ny manodidina raha vao nahaheno ny fanafihana ka raikitra ny fanarahan-dia ny omby sy ny dahalo, niaraka amin’ireo zandary miisa dimy sy miaramila sivy. Maizina ny andro ka nanano sarotra ny fanenjehana ny dahalo noho ny tsy fahafantaran’izy ireo ny kizo rehetra eny an-toerana niafenan’ireo dahalo. Raha ny angom-baovao, fantatra fa maty ny iray amin’ireo dahalo nandritra ny tifitra nifanaovan’ireo mpitandro filaminana, raha voatifitr’ireo dahalo teo am-panarahan-dia kosa ny telo amin’ny fokonolona ka namoy ny ainy teo no ho eo.
Araka ny loharanom-baovao, taorian’ireo tifitra nifanaovan’ireo dahalo sy ireo zandary sy ny miaramila, tafaverina ny omby miisa roapolo an’ireo fokonolona raha novonoin’ireo dahalo teo an-toerana ny telo tamin’izany. Niahotra kosa ireo fokonolona ary tsy nanao ny fanarahan-dia intsony raha vao matin’ny dahalo ny naman’izy ireo. Etsy andaniny, mbola nirifatra nitsoaka niaraka tamin’ireo omby 28 an’ireo olona teo Ampasimaiky ireo dahalo ireo. Raha ny vaovao voaray, namoy ny ainy omaly hariva ihany koa ilay olona naratra mafy vokatry ny tifitra nataon’ireo dahalo. Nanambara ny eo anivon’ny zandarimaria fa mbola mitohy ny fikarohana ireo dahalo ireo miaraka amin’ireo omby sisa tavela.